မဒေါင်းလုပ် Downloaders မဆော့ဝဲ မအဘို့ Windows
မဒေါင်းလုပ် Downloaders မဆော့ဝဲ
အင်တာနက် Download Manager ဆိုတာဘာလဲ။ Internet Download Manager (IDM / IDMAN) သည်မြန်ဆန်သောဖိုင်ဒေါင်းလုပ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Chrome၊ Opera နှင့်အခြား browser များနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤဖိုင်ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာနှင့်အတူသင်အင်တာနက်မှရုပ်ရှင်များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်း၊ ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်း၊ တေးဂီတကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်း၊ YouTube...
jDownloader သည် operating system platform အားလုံးပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်သော open source free file manager manager ဖြစ်သည်။ Java တွင်လုံးလုံးလျားလျားဖန်တီးထားသောဤဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် Rapidshare.com, Megaupload.com, Megashares.com စသည်တို့တွင်ရနိုင်သည်။ file hosting sites များမှ file downloads များကိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော tool...
Kigo Netflix Downloader ပရိုဂရမ်သည် Netflix download အကန့်အသတ်မရှိဘဲကွန်ပျူတာသို့ရုပ်ရှင် (series/series) ကို download ရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေးသည်။ အကယ်လို့မင်းက Netflix ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို Windows ကွန်ပျူတာမှာဒေါင်းလုပ်ဆွဲဖို့အားစိုက်၊ မြန်ပြီးအခမဲ့အကန့်အသတ်မဲ့နည်းလမ်းကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်ဒီ Netflix downloader...
YouTube Music Downloader သည် ထိပ်တန်း YouTube တေးဂီတကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲခြင်းနှင့် mp3 ပြောင်းလဲခြင်း ပရိုဂရမ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Youtube ပေါ်ရှိ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော ဗီဒီယိုများ၏ သီချင်းများကို သင့်ကွန်ပျူတာသို့ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည့် Youtube သီချင်းဒေါင်းလုဒ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ သင်သည် YouTube...
Orbit Downloader သည် အသုံးပြုသူများအား ဝဘ်ဆိုက်များ၊ ၎င်းတို့ကြည့်ရှုသည့် ဗီဒီယိုများနှင့် မတူညီသောဖိုင်အမျိုးအစားများကို ၎င်းတို့၏ ကွန်ပျူတာများတွင် ပုံမှန်ထက်ပိုမြန်စွာ နားထောင်နိုင်စေမည့် အခမဲ့ဖိုင်ဒေါင်းလုဒ်မန်နေဂျာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင် ဖိုင်များကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ၊ ပိုလုံခြုံပြီး ပုံမှန်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်စေမည့်...
FlashGet သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အင်တာနက်အသုံးပြုသူဦးရေ အများဆုံးရှိသည့် ထိပ်တန်းနှင့် အလွန်မြန်ဆန်သော ဒေါင်းလုဒ်မန်နေဂျာဖြစ်သည်။ သင်၏ဒေါင်းလုဒ်များကို လျင်မြန်စွာပြုလုပ်နိုင်စေမည့် ဤပရိုဂရမ်သည် ၎င်း၏အသုံးပြုသူများသည် အသစ်ထည့်သွင်းထားသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ ၎င်းတို့၏စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုများကို အရှုံးမပေးကြောင်း သေချာစေသည်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်...
Free Download Manager သည် ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအား အင်တာနက်မှဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသောဖိုင်များကို ပိုမိုမြန်ဆန်ချောမွေ့စွာ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များပါရှိသော အခမဲ့ဖိုင်ဒေါင်းလုဒ်မန်နေဂျာဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လွတ်လပ်မှုနှင့် အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များကြောင့် ၎င်း၏အတန်းရှိ အနှစ်သက်ဆုံးဖိုင်ဒေါင်းလုဒ်မန်နေဂျာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည့် FDM သည်...
YouTube သည် လူကြိုက်အများဆုံး ဗီဒီယိုကြည့်ရှုသည့် ဆိုက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် လမ်းကြောင်းသစ်ဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ သုံးစွဲသူ သန်းပေါင်းများစွာကို ဆွဲဆောင်နေခဲ့သည်။ ဆက်တိုက်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရှိသော ကွန်ပျူတာများတွင် သင်အလိုရှိသလောက် ဗီဒီယိုအများအပြားကို ကြည့်ရှုနိုင်သော်လည်း ချိတ်ဆက်မှု အကန့်အသတ်ရှိသော သို့မဟုတ် အဆက်ပြတ်သွားသော...
အခမဲ့ Music & Video Downloader သည် ဗီဒီယိုနှင့် သီချင်းဒေါင်းလုဒ်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်သော ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လူကြိုက်များသော ဝဘ်ဆိုက်များမှ ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် သင်အများစုမှာ ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သော်လည်း အသုံးနည်းသော ဝဘ်ဆိုဒ်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်သော ပရိုဂရမ်များ သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုဒ်များကို ရှာဖွေရန် မလွယ်ကူပါ။...
Ashampoo ClipFinder HD သည် ဗီဒီယိုမျှဝေခြင်းဆိုက်များ (YouTube၊ Vimeo၊ Spike၊ Veoh၊ Google Video၊ LiveVideo၊ Dailymotion၊ blip.tv၊ Yahoo! Video၊ Metacafe၊ MySpace၊ SevenLoad၊ MyVideo၊ , videou နှင့် ClipFish) သည် ပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ အခြားပရိုဂရမ်များနှင့် ကွာခြားချက်မှာ ၎င်းသည် သင့်အား ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရုံသာမက ဗီဒီယိုများကိုပါ...
VSO Downloader သည် အခမဲ့နှင့် အောင်မြင်သော ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင်သည် Youtube တွင် သင်ကြည့်ရှုနေသည့် ဗီဒီယိုများနှင့် အလားတူဆိုက် ရာပေါင်းများစွာကို သင့်ကွန်ပျူတာတွင် အသံ သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုဖော်မတ်ဖြင့် ချက်ချင်းသိမ်းဆည်းနိုင်စေမည့် အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ပရိုဂရမ်သည် သင်အင်တာနက်ကြည့်ရှုနေစဉ်တွင် ဖွင့်ထားသည့် ဗီဒီယိုများကို...
Ninja Download Manager သည် အင်တာနက်မှ ဖိုင်များ၊ ဗီဒီယိုများနှင့် သီချင်းများကို အလွယ်တကူ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည့် ဒေါင်းလုဒ်မန်နေဂျာဖြစ်သည်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး လက်တွေ့ကျသော Ninja ဒေါင်းလုဒ်မန်နေဂျာဖြင့်၊ သင်သည် မတူညီသောချန်နယ်များမှ ပစ်မှတ်ဖိုင်ကို လျင်မြန်စွာဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ မြန်နှုန်းမြင့် ဖိုင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းကို...
Wise Video Downloader ဖြင့် Youtube တွင် သင်လိုချင်သော ဗီဒီယိုများကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ပြီး လိုချင်ပါက ရှာဖွေမှုရလဒ်များမှ သင်လိုချင်သော ဗီဒီယိုများကို သင့်ကွန်ပျူတာသို့ အလွယ်တကူ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ Youtube video downloader ဟုခေါ်သော Wise Video Downloader သည် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး အသုံးဝင်သောဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ သင်သည်...
MP3jam သည် သင်နှစ်သက်သော အနုပညာရှင်များထံမှ တေးဂီတအယ်လ်ဘမ်များနှင့် သီချင်းများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ဖန်တီးထားသော အဆင်ပြေပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော အပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပရိုဂရမ်သည်အသုံးပြုရန်အလွန်ရိုးရှင်းသည်။ သင်လုပ်ရမည့်အရာမှာ ရှာဖွေမှုအပိုင်းရှိ အဆိုတော်၊ သီချင်း သို့မဟုတ် အယ်လ်ဘမ်အမည်ကို ရိုက်နှိပ်ပြီး ရလဒ်များမှ...
Instagram ဓာတ်ပုံဒေါင်းလုဒ်နှင့် Instagram ဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် အခမဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Instagram Downloader ဖြင့် Instagram ဓာတ်ပုံများကို ကွန်ပျူတာတွင် သိမ်းဆည်းရန် အလွန်မြန်ဆန်လွယ်ကူသည်။ ပရိုဂရမ်၏အကူအညီဖြင့် Instagram အကောင့်၏အသုံးပြုသူအမည်ကိုထည့်သွင်းပြီး Instagram ဓာတ်ပုံဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း၊...
ChrisPC Free VideoTube Downloader သည် မတူညီသော ဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်ဆိုဒ်များစွာမှ ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည့် အခမဲ့ဗီဒီယိုဒေါင်းလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စံ Youtube ဗီဒီယိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသူထက် ပိုမိုပြည့်စုံသော ပရိုဂရမ်ဖြစ်သည့် ChrisPC Free VideoTube Downloader ဖြင့် သင်သည် Youtube မှ ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်သည့်အပြင် Dailymotion...
FeedTurtle သည် သင်လိုက်ကြည့်နေသည့် သင်၏ RSS feeds နှင့် TV ရှိုးအားလုံးကို ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြင့် စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေမည့် ဘက်စုံသုံး RSS reader တစ်ခုဖြစ်သည်။ FeedTurtle ၏ RSS မန်နေဂျာနှင့် သင်ဘာလုပ်နိုင်သနည်း။ အသုံးပြုရလွယ်ကူသော RSS ဘားဖြင့် သင်၏ RSS feeds အားလုံးကို စီမံခန့်ခွဲပါ၊ဘရောက်ဆာကဲ့သို့တည်းဖြတ်ခြင်းဖြင့် သင်အကြိုက်ဆုံး RSS...
Freemake Video Downloader သည် အခမဲ့နှင့် အစွမ်းထက်သော ဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လူကြိုက်များသော ဗီဒီယိုမျှဝေသည့်ဆိုဒ်များတွင် သင့်ကွန်ပြူတာသို့ ဗီဒီယိုဖော်မတ်အမျိုးမျိုးဖြင့် သင့်စိတ်ကြိုက်ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ Youtube၊ Facebook၊ DailyMotion၊ Vimeo၊ MTV နှင့် အခြားနာမည်ကြီး ဝဘ်ဆိုဒ်ထောင်ပေါင်းများစွာမှ...
DDownloads သည် အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး အသုံးဝင်သော ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်အား ဤဆော့ဖ်ဝဲ၏ဒေါင်းလုဒ်လင့်ခ်များကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် သင်သည် အင်တာနက်ပေါ်တွင် သင်ရှာတွေ့နိုင်သည့် အသုံးဝင်သော မည်သည့်အက်ပ်လီကေးရှင်း သို့မဟုတ် ပရိုဂရမ်ကိုမဆို အလွယ်တကူဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Antivirus ပရိုဂရမ်၊ ဗီဒီယိုကိရိယာများ၊ ရုပ်ပုံတည်းဖြတ်သူများ...
VidMasta သည် အသုံးပြုသူများအား ၎င်းတို့၏ စိတ်ကြိုက်ရုပ်ရှင်များ သို့မဟုတ် နောက်ဆုံးထုတ် တီဗီရှိုးအပိုင်းများအကြောင်း သိစေမည့် အသုံးပြုရလွယ်ကူသော အပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ သင်အလိုရှိသော ရုပ်ရှင်နှင့် ဗီဒီယိုများ (Bootleg၊ TV၊ DVD၊ 720i၊ 720p၊ 1080i နှင့် 1080p) ကို နှိပ်ရုံဖြင့် သင့်ကွန်ပျူတာသို့ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။...
Tumblr Image Downloader သည် အသုံးပြုသူများအား Tumblr ဓာတ်ပုံများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ကူညီပေးသည့် အခမဲ့ ဖိုင်ဒေါင်းလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Tumblr Image Downloader သည် Java အခြေခံဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Tumblr ပုံများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရာတွင် လွယ်ကူပြီး လက်တွေ့ကျစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ပရိုဂရမ်ဖြင့် Tumblr မှ ဓာတ်ပုံများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်၊...
EZ YouTube Video Downloader သည် အသုံးပြုသူများအတွက် အသုံးဝင်သော Google Chrome extension တစ်ခုဖြစ်ပြီး လူကြိုက်များသော ဗီဒီယိုမျှဝေခြင်းဆိုက် Youtube တွင် ၎င်းတို့ကြည့်ရှုပြီး ကြိုက်နှစ်သက်သည့် ဗီဒီယိုများကို အလွယ်တကူဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ သင့်ကွန်ပြူတာရှိ Youtube တွင် သင်အကြိုက်ဆုံးဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်...
MediaHuman Youtube Downloader သည် Youtube ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် အသုံးပြုရလွယ်ကူသော မျက်နှာပြင်ပါရှိသော ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပရိုဂရမ်ဖြင့် သင်သည် ဗီဒီယိုများစွာကို တစ်ချိန်တည်းတွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပြီး ဗီဒီယိုမည်မျှဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကာ ဒေါင်းလုဒ်အမြန်နှုန်းကို ကန့်သတ်နိုင်သည်။ MediaHuman Youtube Downloader...
YouTube Music Downloader NG သည် အသုံးပြုသူများအား YouTube ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်နှင့် YouTube ဂီတကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ကူညီပေးသည့် အခမဲ့ ဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် သီချင်းနားထောင်ခြင်းနှင့် ဗီဒီယိုများကြည့်ရန် YouTube ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုကို နှစ်သက်ပါက ချိတ်ဆက်မှုပြဿနာများ မည်မျှအထိအနှောက်အယှက်ဖြစ်နိုင်သည်ကို...
Video Download Capture သည် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များပေါ်ရှိ ဗီဒီယိုစီးကြောင်းများကို ရိုက်ယူနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို သင့်ကွန်ပြူတာတွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည့် အစွမ်းထက်သော ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုနှင့် ဒေါင်းလုဒ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အဆင့်မြင့် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုနည်းပညာကြောင့် ၎င်းတို့ကို သင့်ကွန်ပြူတာတွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုပေးပါသည်။...
GetGo Download Manager ဖြင့် သင်သည် အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လိုသော ဖိုင်များကို ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒေါင်းလုဒ်ဖိုင်တွဲများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းအပြင် YouTube၊ Myspace၊ Google Video၊ MetaCafe၊ DailyMotion၊ iFilm/Spike၊ Vimeo၊ သင်၏ကွန်ပျူတာသို့ ဖြတ်သွားခြင်းကဲ့သို့သော flv သို့မဟုတ် mp4 extension...
YTM Converter သည် အသုံးပြုသူများအား YouTube တေးဂီတကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ကူညီပေးသည့် YouTube MP3 Downloader တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ကွန်ပြူတာတွင် အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သည့် YTM Converter ကြောင့် ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ သင်သည် YouTube ပေါ်ရှိ သီချင်းများကို နားထောင်ရာတွင် တွေ့ကြုံရသည့် ပြဿနာများကို အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်...
SoundDownloader သည် အသုံးဝင်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော Soundcloud ဂီတဒေါင်းလုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Soundcloud တွင် သင်နားထောင်သော သီချင်း၏ လင့်ခ်လိပ်စာများကို ပရိုဂရမ်၏ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍသို့ ကူးထည့်ခြင်းဖြင့် သင့်ကွန်ပျူတာတွင် mp3 နှင့် aac ဖော်မတ်ဖြင့် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လိုသော သီချင်းများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ SoundDownloader ပရိုဂရမ်ဖြင့်...
YouTube Picker သည် သုံးစွဲသူများသည် YouTube ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၎င်းတို့သည် အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ကာ အသုံးပြုနိုင်သည့် ဗီဒီယိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည့် ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပြူတာတွင် YouTube ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အားလပ်ချိန်များကို ကုန်ဆုံးလိုသော...
HiDownload သည် အင်တာနက်မှ ဖိုင်များကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပြီး ဖိုင်များကို မြန်နှုန်းမြင့်ဖြင့် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ဖိုင်ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင့်အား အချိန်တိုအတွင်း အလွန်ကြီးမားသောဖိုင်များကိုပင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပြီး အမျိုးမျိုးသော တေးဂီတနှင့် ဗီဒီယိုဖိုင်များကို အလွယ်တကူ အပ်လုဒ်လုပ်နိုင်သည်။...
Google2SRT ပရိုဂရမ်သည် YouTube ပေါ်ရှိ သင်ကြည့်ရှုသည့် ဗီဒီယိုများ၏ စာတန်းထိုးများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လိုပါက အသုံးပြုနိုင်သော ပရိုဂရမ်များထဲမှဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ၎င်း၏ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ကုဒ်နှင့် အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကြောင့် သုံးစွဲသူအားလုံးအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိမည်ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည်။ ပရိုဂရမ်၏ အင်တာဖေ့စ်တွင်...
Facebook Albums Downloader ပရိုဂရမ်သည် Facebook ပေါ်ရှိ သင့်အယ်လ်ဘမ်များကို သင့်ကွန်ပြူတာသို့ အလွယ်တကူဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် အခမဲ့နှင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူသော အပလီကေးရှင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် သင်၏ အယ်လ်ဘမ်ဓာတ်ပုံအားလုံးကို တစ်ပုံချင်း ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် မလိုအပ်ဘဲ အခက်အခဲမရှိဘဲ အရန်ကူးယူနိုင်ပါသည်။ အလုပ်လုပ်ရန် သဘာဝကျကျ...
FlareGet Download Manager သည် အသုံးပြုသူများအား ဖိုင်များကို လျင်မြန်စွာဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ကူညီပေးသည့် ဖိုင်ဒေါင်းလုဒ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ FlareGet ဒေါင်းလုဒ်မန်နေဂျာသည် ဖိုင်များကို အပိုင်းပိုင်းခွဲသည့်နည်းလမ်းအတွက် ၎င်း၏အမြန်ဒေါင်းလုဒ်အင်္ဂါရပ်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။ FlareGet Download Manager သည် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်မည့်ဖိုင်များကို...
Grooveshark Music Downloader သည် အသုံးပြုသူများအား Grooveshark ဂီတကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ကူညီပေးသည့် အခမဲ့ တေးဂီတဒေါင်းလုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂီတကို အွန်လိုင်းနားဆင်ရန် အခွင့်အရေးပေးသည့် Grooveshark သည် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရှိသော စက်များတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများတွင် အင်တာနက်ရှိလျှင်ပင်၊ ဘရောက်ဆာနှင့်...
YouTube Video Downloader Pro သည် သုံးစွဲသူများအား YouTube ဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်နှင့် YouTube သီချင်းဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သည့်အပြင် Facebook ဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်၊ Vimeo ဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်နှင့် Dailymotion ဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်တို့ကို ကူညီပေးသည့် ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ YouTube Video Downloader Pro သည် ကျယ်ပြန့်သောအွန်လိုင်းဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုကို...
HTTrack သည် ရိုးရှင်းသောသုံးနိုင်သော အော့ဖ်လိုင်းဘရောက်ဆာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်၊ ၎င်းသည် သင့်အား ဝဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် စာမျက်နှာများကို သင့်ကွန်ပျူတာသို့ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်နှင့် အဆိုပါဆိုက်များနှင့် စာမျက်နှာများကို အော့ဖ်လိုင်းတွင် လုပ်ဆောင်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ HTTrack ဖြင့်၊ သင်သည် ဖိုင်တွဲများအားလုံး၊ html ဖိုင်များအားလုံး၊...
MassFaces သည် အသုံးပြုသူများ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည့် ပြဿနာများဖြစ်သည့် Facebook ဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းအတွက် လွယ်ကူသောဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ပေးဆောင်သည့် အခမဲ့ဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Facebook အသုံးပြုသူများသည် မတူညီသော ကွန်ပျူတာများတွင် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် Facebook ဗီဒီယိုများကို လွှင့်တင်ကြည့်ရှုရန် လိုအပ်ကြောင်း မကြာခဏ...
Mail Attachment Downloader သည် သင့်တွင် အီးမေးလ် အသွားအလာ များပြားပါက အီးမေးလ် ပူးတွဲပါဖိုင်များကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်အတွက် လက်တွေ့ကျပြီး မြန်ဆန်သော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ပေးဆောင်မည့် ဖိုင်ဒေါင်းလုဒ်မန်နေဂျာ ဖြစ်သည်။ သင့်ကွန်ပြူတာများတွင် အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သည့် Mail Attachment Downloader ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်အီးမေးလ်...
FooDownloader သည် အသုံးပြုသူများအား အင်တာနက်ပေါ်တွင်တွေ့မြင်ရသည့် မည်သည့်ဖိုင်ကိုမဆို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခွင့်ပြုသည့် အခမဲ့ဖိုင်ဒေါင်းလုဒ်မန်နေဂျာဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရှာဖွေမှု module ကြောင့် FooDownloader သည် သင့်အား ပရိုဂရမ်မှတစ်ဆင့် သင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လိုသောဖိုင်များကို ရှာဖွေနိုင်ပြီး အဆိုပါဖိုင်များကို အလွယ်တကူဝင်ရောက်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်...
YouTube Downer သည် အသုံးဝင်ပြီး အခမဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝတွင် လူများစွာအသုံးပြုသည့် YouTube တွင် ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်၊ သီချင်းများကို နားထောင်ရန်ပင် ခွင့်ပြုထားသည်။ အလွန်ရိုးရှင်းပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူသော ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြု၍ ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်၊ သင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လိုသော ဗီဒီယို၏ URL ကို...
ဝဘ်ဆိုဒ်များမှ ရုပ်ပုံများ၊ သီချင်းနှင့် ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းသည် ယခုအခါ NeoDownloader ဖြင့် ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ ဝဘ်ဆိုဒ်များတွင် ပုံများကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဒေါင်းလုဒ်လုပ်မည့်အစား၊ ၎င်းတို့ကို အစုလိုက် အလွယ်တကူ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် အချိန်ကုန်သက်သာစေမည်ဖြစ်သည်။ ဆုရဒေါင်းလုပ်ကိရိယာဖြစ်သည့် ဤအက်ပ်၊ ၎င်းသည်...
Mass Download သည် သင့်အား ဝဘ်ဆိုက်များမှ သင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လိုသော ဖိုင်များစွာကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုသည့် ဖိုင်ဒေါင်းလုဒ်မန်နေဂျာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလွန်ရိုးရှင်းပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူသော ပရိုဂရမ်တစ်ခု၊ Mass Download သည် အလွန်မြန်ဆန်သောကြောင့် ပရိုဂရမ်ကို ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး မလိုအပ်သောပစ္စည်းများမပါဝင်ပါ။...
Tiny Downloader သည် အသုံးပြုသူများအား YouTube ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်၊ Dailymotion ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် စသည်တို့ကို ခွင့်ပြုပေးသည့် အခမဲ့ ဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ YouTube နှင့် Dailymotion တို့မှလွဲ၍ အခြားအွန်လိုင်းဗီဒီယိုကြည့်ရှုသည့်ဆိုဒ်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် အဆိုပါပရိုဂရမ်သည်...
VDownloader သည် သင့်ကွန်ပြူတာသို့ ဗီဒီယိုမျှဝေသည့်ဆိုဒ်များမှ ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်နှင့် ဗီဒီယိုအချက်အလက်များကို အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်ရန် ကူညီပေးသည့် အခမဲ့ဗီဒီယိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသော ဗီဒီယိုများအတွက် ဖော်မတ်ပြောင်းခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်သည် VDownloader မှတစ်ဆင့် အတွင်းရှိ FLV...
TubeDigger သည် သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့် မည်သည့်ဝဘ်စာမျက်နှာမှ ဗီဒီယိုများကို ရိုက်ကူးနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို သင့်ကွန်ပျူတာသို့ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုသည့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရရှိနိုင်သော ပရိုဖိုင်များထဲမှ တစ်ခုကို အသုံးပြု၍ ရိုက်ကူးထားသော ဖိုင်များကို သင်အလိုရှိသော ဖော်မတ်သို့ ပြောင်းနိုင်သည်။ TubeDigger ဖြင့်...
VkAudioSaver ပရိုဂရမ်သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ လူကြိုက်အများဆုံး ရုရှားလူမှုရေးကွန်ရက်အဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့သည့် Vkontakte တွင် တေးဂီတဖိုင်များကို အလွယ်တကူနားဆင်နိုင်ပြီး ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် အခမဲ့ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ် ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ Vkontakte တွင် အဆိုတော်တိုင်း၏ အယ်လ်ဘမ်နှင့် သီချင်းတိုင်းနီးပါးကို...
MelodyQuest သည် အလွန်အသုံးဝင်သော တေးဂီတဒေါင်းလုဒ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူများသည် တေးဂီတအသစ်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိကာ ၎င်းတို့၏ စိတ်ကြိုက်အနုပညာရှင်များ၏ ကွန်ပြူတာများတွင် သီချင်းများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုရအလွန်လွယ်ကူသော ပရိုဂရမ်၏အကူအညီဖြင့် သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာ ရှာဖွေမှုကဏ္ဍမှတစ်ဆင့်...
Tmib Video Download သည် အသုံးပြုသူများအား YouTube ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်နှင့် YouTube သီချင်းများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ကူညီပေးသည့် အခမဲ့ ဗီဒီယိုဒေါင်းလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်အသက်တာတွင်၊ YouTube တွင် ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုသည့်အခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည့်ပြဿနာမှာ အရည်အသွေးမြင့်မားသောဗီဒီယိုများကို...